ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ… – Shwe Naung
ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ ရင်ဖိုဖွယ် ပုံရိပ်လေးများ…
N N | March 28, 2021 | Celebrity | No Comments
ဆက်ဆီ Model ဖူးပွင့်ခိုင်က ခွဲစိတ်ပြုပြင် ထားတဲ့ အေပါ်က ခံစားခကြ်ကို လည်း “ မလိမ်တော့ ပါ ဘူး ခွဲစိတ်ပြုပြင် ထားလားဆို တော့ ဟိုလို ဆီလီကွန် ကြီးတွေ ဘာတွေ ထည့်ထားတာ မဟုတ်ဘူး ပေါင်ရဲ့ အသား ကို ရင် ဘတ် ထဲထည့် လိုက်တာ..။
ဘာဖြဈလို့ လဲဆိုတော့ ဆီ လီကွန် လိုမြိုးက မေကာင်းဘူး လေ အဲ့ဒါကြောက် လို့ ကိုယ့်ရဲ့အသား လေ ဘာပဲဖြဈဖြဈ ဆီလီကွန် မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ အသား ဆိုတော့ အော် ရီဂျင်နယ် ပဲလေ..။
အရမ်းကွာ တယ် Confidence အရမ်း ကွာ တယ် ဘာဖြဈလို့လဲ ဆိုတော့ မရွိတာ နဲ့ ရွိတာနဲ့ စာရင် ရွိ တာပဲပိုကြိုက် ကြတာ လေ မိန်းကေလးတွေ က ကိတ်တာ ကို ပိုြ ကို က်ကြတယ် လေ..။
ညီမကိုယျတိုငျ ကလညျး ရှိတာပို ပွီးတော့ သ ဘာကတွယျ ။”ဆိုပွီးပွောပွသှား ပါတယျ..။
Facebook ရစေီး ကွောငျးပေါျ က ခတျေ နဲ့ တေ ပွးညီ Challenge တှေ ကို မလိမျမညာ ဘဲ အမှနျအကနျ လုပျပွလို့ ယောကျြားလေး ထုကွီးရဲ့ အားပေးမှု ကိုရရှိထား တဲ့ ဆကျဆီ Model ဖူး ပှငျ့ ခို ငျကို တော့ ကိုကိုညီညီ တှေ သိပွီးသားဖွဈမှာ ပါ..။
သူနဲ့ Myanmar Celebrity နဲ့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောပွ သှားတဲ့ အကွောငျး တှကေို ပွောခငြျလှနျး လို့ ပရိသတျတှသေိအောငျ ေွ ပာေွ ပပးလိုကျ ပါ တယျ..။
နမွေိုးအောငျသားနဲ့ ဓာတျပုံတှေ ကိစ်စကို လညျး “ ညီမ တို့ကေ တာ့ သူငယျခငြျးပဲ Just Friend ပေါ့ သူငယျခငြျး ပါပဲ..။
ညီမက အနုပညာ လုပျတယျလို့ပွောလို့ မရဘူး ဒါပမေယျ့ သူက ကေ တွာ့ အနုပညာလုပျ တယျ လေ အဲ့ဒီအွ ခိနျကတွော့ ဒါက သာမနျပါပဲ သူမြားအမွငျမှာတော့ မသိ ဘူး ညီမအမွငျမှာတော့ သာမာနျ ပါပဲ..။
အရငျကတညျး က ခငျတာပါ သူမြားတှေ ကကွ ကွ ညျနူးေ နတဲ့ ပုံတှေ အလှပုံတှေ ပဲ ရိုကျွ ကတာလေ အဲ့တာ ကွောငျ့ စုတျစုတျပွတျပွတျ နဲ့ရိုကျကွမလား ဆိုပွီး တော့ တောျတောျ တော့
ကွာတယျ အ ခွိနျယူလိုကျရတယျ ညီမက လညျး ဟိုမှာ မ အားတာနဲ့ အဲ့တာ ကွောငျ့ မွနျမာပွညျွ ပနျဆငျးလာရငျ ရိုကျမယျ လို့ပွော ထား တာ..။”ဆိုပွီး ပွောပွသှားပါ တယျ…။
အတွင်းသားလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး…….
စတိုင်တွေနဲ့ သူမ ရဲ့ ရင်ခုန်စရာ အလှတွေ ပေါ်လွင်အောင် ပို့စ် အမိုက်စား တွေပေး လိုက်တဲ့ “လုလုအောင်”…..
အလှမယ် ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
ပူအိုက်လို့ ညည်းမိမယ် ကြံတိုင်း ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း ခံထားရ သူတွေ ကို အားနာပြီး မျက်ရည် ကျရတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတဲ့ အေးသီတာ….